Download MySocial for Android by MySQUAR Ltd - Appszoom
by: MySQUAR Ltd • 292 8.6
Developer : MySQUAR Ltd
- Facebook ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် Facebook သို့ ဝေမျှရန်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော Bug ကိုပြင်ဆင်ထားခြင်း
- Email အတည်ပြုရန်ကိုပြန်ပြင်ထားခြင်း
- MySQUAR နှင့် MySocial တို့ရဲ့အသွင်အပြင်သစ်နဲ့မွမ်းမံထားမှု
- Post Stream ပုံစံသစ်နှင့်အတူ Post များရဲ့ အသေးစိပ်အချက်အလက်
Myanmar's leading social network!
MySocial ဆိုတာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်ဖို့ နဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းများအချင်းချင်း နှီးနှောဖို့ရန် အကောင်းဆုံးနေရာလေးဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာနှင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော မြန်မာ့
MySocial isagreat way to meet new friends, share information and chat around common interests - all for free and all in Myanmar.
-အခမဲ့ စိတ်ကြိုက် ပို့စ်များရေးသားနိုင်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း
-ပိုစ့်များ ပုံများ၏အောက်တွင် အကြောင်းပြန်နိုင်ခြင်း၊ ဝေမျှနိုင်ခြင်း၊ ကြိုက်ကြောင်း ပြသနိုင်ခြင်း
-MySocial မှသူငယ်ချင်းများနှင့် ချက်တင်ပြောနိုင်ခြင်း
- All in full Myanmar language
- Completely open and free communication and posting
- Post comments, photos and polls
- Like, Reply and Share content
- Instant chat to MySocial friends
- Group chat to meet new friends
Free - 0.9.396 - 5M